Ny Nexus 6P, 5X ary Pixel C dia efa manana Android 7.1 Dev Preview | Androidsis
Android 7.1 dia niseho tamin'ny Google Pixel miaraka amina endri-javatra maromaro izay izahay dia efa nandinika tamin'ny fotoana roa herinandro lasa izay miaraka amin'ny Big G finday manokanaary herinandro lasa izay rehefa natolotra. Tao anatin'io vaovao farany io izay nilazana hoe rahoviana izy no ho tonga mandritra ity volana ity.
Androany ny Topi-maso ny mpamorona Android 7.1 ho an'ny Nexus 6P, 5X ary Pixel C. Ny topi-maso dia azo alaina ao amin'ny pejy Android Beta Program ho anao misintona sy mizaha toetra. Andiany 7.1 izay heverina ho azo amin'ny volana desambra.
Android 7.1 dia misy andian-dahatsoratra vaovao, na dia ny ankamaroany aza dia mifandraika amin'ny fanajana ny Pixel, ary amin'ny lafiny hafa lojika (na ny Nexus aza dia nanana azy ireo, na dia vitsy an'isa aza). Ny preview an'ny developer Android 7.1 Nougat dia miaraka amin'ny hitsin-dàlana fandefasana, kisary boribory ary ny fanohanana sary an-tsarimihetsika ary ny fidirana hanafaka ny habaka amin'ny finday.
Fa, ny tena mahaliana dia ny Fiovana API izay hahafahan'ny mpamorona manavao ny fampiharana azy ireo mba hampiditra ny sasany amin'ireo lafiny mahavariana indrindra amin'ny Android Nougat. Nova Launcher sy andiana fampiharana hafa no ho tonga amin'ireo fanovana ireo amin'ny endrika fisehoan-javatra vaovao hahasarika ny fampiharana azy ireo.
Afaka mandray anjara amin'ny Fandaharana Android Beta hahazoana ny topi-maso ny mpamorona na haka ny sarin'ny rafitra avy amin'ity rohy ity handrehitra azy ireo amin'ny tanana. Tokony ho tsaroana koa fa, eo ambanin'ny topi-maso mialoha ny mpamorona dia mety hitranga izany manana bibikely sy tsy fahombiazan'ny fampisehoana, noho izany dia efa mihoatra ny fampitandremana ianao.
Google dia nanambara fa hanitatra ny manohana fitaovana bebe kokoa ho an'ny volana Novambra. Ho an'ny kinova farany dia mila miandry ny volana desambra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Android 7.1 Dev Preview dia azo alaina amin'ny Nexus 6P, 5X ary Pixel C